Umzi mveliso wokubiya welanga - China Abenzi bocingo beSolar abavelisi, abaxhasi
M-ezimilise Isefu welding enemingxuma Fence Kuba Izityalo Solar
Ucingo lwecingo olujiyiweyo olu-3D lukwabizwa ngokuba lucingo olubiyelweyo, ucingo lwesinyithi, uthango lokhuseleko, ucingo lwelanga. Luhlobo lwethu olushushu lokuthengisa ucingo kummandla we-APAC ngakumbi iJapan kwaye isetyenziswa ikakhulu kwiprojekthi yelanga njengomqobo wokhuseleko.
I-3D egobileyo yocingo oluthambileyo locingo, ucingo oluthandwayo lwe-mesh ucingo njengocingo lokhuseleko lokuhlala eMntla Melika
Ucingo lwentambo egobileyo ye-3D lubhekisa kwocingo olwenziweyo lwe-3D, ipaneli yocingo lwe-3D, ucingo lokhuseleko. Kuyafana nenye imveliso yemilo emise okwe-M yocingo olubiyelweyo kodwa eyahlukileyo kwisithuba semingxunya kunye nonyango lomphezulu ngenxa yesicelo esahlukileyo. Olu cingo luhlala lusetyenziswa kwizakhiwo zokuhlala ukuthintela abantu ukuba bangene endlwini yakho bengamenywanga.
Isangqa kabini Powder Camera wocingo olubiyele zobunjineli kaMasipala
Isangqa esibini esenziwe ngocingo oluthambileyo lubizwa ngokuba lucingo oluphindwe kabini locingo, ucingo lwegadi, ucingo lokuhombisa. Ngothango olulungileyo ukukhusela ipropathi kwaye ijongeka intle ngokunjalo. Ke isetyenziswe ngokungenalusini kubunjineli bukaMasipala, kubunjineli bokwakha.
I-BRC yocingo lwentsimbi ebiyelweyo ngocingo olukhethekileyo olunemijikelezo enobuhlobo ekwabizwa ngokuba lucingo oluphezulu lwengingqi kwindawo ethile. Yinto ethandwayo yocingo lwentsimbi eMalaysia, eSingapore, eSouth Korea, kwisicelo sokuhlala kunye nesorhwebo.
C-ezimilise Powder Camera welding enemingxuma Fence Kuba Power Izityalo
C-ezimilise welding ucingo wocingo yenye umthengisi eshushu eJapan ukuba ukusetyenziswa okanye ukusetyenziswa izityalo elanga. Kukwabizwa ngokuba yingcingo yocingo olucinyingweyo, ucingo lwentsimbi olwenziweyo, ucingo lokhuseleko, ucingo lwelanga. Kwaye uqhelene ne-3D egobileyo yocingo olucinyiweyo lolwakhiwo kodwa eyahlukileyo kwimilo yokugoba phezulu nasezantsi kocingo.
M-ezimilise Isefu welding enemingxuma Fence (Enye-sifuba Post) kwifama elanga
Ucingo olucekeceke olubiyele nge-M luyilelwe izityalo zelanga / iifama zelanga. Ke ikwabizwa ngokuba yi "solar plant fence". Kuyafana nolunye ucingo lwezityalo elanga kodwa usebenzisa iposti endaweni yokugcina iindleko kunye nokwenza lula amanyathelo okwakha.
Isefu ebiyelweyo yocingo olubiyele ulimo kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso
Ucingo locingo oluhanjiswe ngesinyithi lwenzelwe ukuba iprojekthi ibe nohlahlo-lwabiwo mali olunqongopheleyo kodwa lufuna ucingo oluphezulu. Isetyenziswa kakhulu kwezolimo nakwimizi-mveliso ngenxa yeendleko zayo eziphezulu.
Chain Link Kucingo olubiyele Kuba isicelo yorhwebo kunye yokuhlala
Ucingo lwekhonkco lomxokelelwano kukwabhekiswa kulo ngokuba ngumnatha wocingo, ucingo locingo, ucingo locingo, ucingo lwenkanyamba, ucingo lwenkanyamba, okanye ucingo lwedayimani. Luhlobo locingo olukiweyo oluhlala lusenziwa ngocingo oluhlanganisiweyo kunye nocingo oluthandwayo lwe-perimeter eCanada nase-USA.